Porn၊ အသစ်အဆန်းနှင့်မကျေနပ်မှု (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
porn, အသစ်အဆန်းများနှင့်မကျေနပ်မှုက (2011)
Porn သင့်အိမ်ထောင်ဖက်နည်းအယူခံ Make နိုင်သလား?
သငျသညျလက်ထပ်နှင့် porn, အသုံးပြု. ဆိုရင် "da ယောက်ျားသည်ကိုသင်!" အနည်းဆုံးသင့်ရဲ့ဗီဇ '' ခန့်မှန်းချက်ပါ။ ပထမဦးစွာသင့်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်သစ်စာဂတိသင့်ရဲ့ပူးတွဲသားစဉ်မြေးဆက်ဟူမူကားဗီဇ packets တွေကို (လေးတွေ) ၏ရှင်သန်မှုလေးသာမှုတိုးတက်အောင်နှစ်ခုစောင့်ရှောက်သူများရှိသည်လိမ့်မယ်သောအခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်သငျသညျတော်တော်လေးအချို့ရှိပါသည်သင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏။
ဒုတိယအချက်အသငျသညျ, အရှင်ပင်ဝေးကွာသင့်ရဲ့ဗီဇပြန့်နှံ့ဖို့ကွိုးစား, သင့်ယောက်ျားသည်အမျိုးအနွယ်ကိုအဘို့အအပူတပြင်းသင်၏ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာမည်သူမဆို servicing ပါတယ်။ အနည်းဆုံးကြောင်းကိုသင်၏ဦးနှောက်၏စရိုက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစေ့စေ့ယုံကြည်နေယျ။ သင် "ပူ" အချက်ပြသည့်အခါကပြောင်းလဲတွေ့ "စစ်မှန်သော fertilization အခွင့်အလမ်း။ "
"da လူ" ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယနေ့ 24 /7အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသင်၏ဘိုးဘေးအစဉ်အဆက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်းရင်ဆိုင်ဘာမှမတူပဲဦးနှောက်ကိုလှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ် မှလွဲ. ကြီးလှ၏။ မဲအနောက်ကဲ့သို့ပင်ကျွန်တော်တို့အများစုကကောင်းတစ်ဦးအရာကိုပိုမို ... ပင် သာ. ကောင်း၏ယူဆ။ ဒီတစ်ခါလည်းမ။ အခမဲ့, streaming porn ရရှိနိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်တဲ့အခါမှာစိတ်ရောဂါ-Norman Doidge သည်သူ၏ porn-သုံးပြီးလူနာအကြားမငြိမ်တစ်ခုခုသတိပြုမိ:
သူတို့နေဆဲသူတို့ကိုဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျဆွဲဆောင်မှုစဉ်းစားသော်လည်း, သူတို့သည်မိမိတို့၏အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်, အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိန်းကလေးများကဖွင့်ထားကြောင်းအတွက်တိုးမြှင့်အခက်အခဲကဖော်ပြခဲ့သည်။ ငါမေးတဲ့အခါဒီဖြစ်စဉ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုဖို့မဆိုဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့ပါလျှင်, သူတို့ကကနဦးကသူတို့ကိုလိင်စဉ်အတွင်းပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားရအကူအညီပေးခဲ့ပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းဖြေသည်။ အခုတော့အစားအိပ်ရာများတွင်ဖြစ်ခြင်းကိုခံစားဖို့သူတို့ရဲ့အာရုံကိုသုံးပြီး၏, ပစ္စုပ္ပန်အတွက်, သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်အတူ lovemaking ပို. ပို. သူတို့တစ်တွေ porn script ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း fantasize သူတို့ကိုလိုအပ်သည်။ ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်, p ။ 104
တစ်ဦးအမြင် porn အသုံးပြုသူ said:
ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်ပြည့်တန်ဆာအကြောင်းအစီအစဉ်တစ်ခုကိုငါမြင်တယ်။ သူတို့ကသူတို့ဟာနာတာရှည်ညစ်ညမ်းတဲ့သူတွေကိုပြောပြနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ အဲဒါကိုရအောင်လုပ်ဖို့လူကိုလှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ အမျိုးသားလိင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်စွာလေ့ကျင့်ထားသောမိန်းကလေးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်မကိုက်ညီပါ၊ in ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခင်မှုကိုသာလိုချင်သည့်သာမန်အမျိုးသမီးများသည်အခွင့်အရေးမရကြပါ။
ဘယ်လိုဒီနေ့စူပါ porn သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုမှသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်လြော့နိုင်မည်နည်း သုံးဦးနှောက်ယန္တရားများ overactivating by:
ရှေးဟောင်းဇီဝအစီအစဉ်ကိုအားလုံးနို့တိုက်သတ္တဝါများ၏ဦးနှောက်အတွက်ပြေး။ sexed ခံရဖို့တောင်းစားအိမ်ထောင်ဖက်အများကြီးရှိပါတယ်တဲ့အခါမှာသဘာဝမွတ်မပြေနိုင်သောပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သည်။ ရာသီအဖော်ရှာစဉ်းစားပါ။ ထိုသို့တန်ဖိုးရှိသောမျိုးရိုးဗီဇအခွင့်အလမ်းအဖြစ်သင့် screen ပေါ်မှာတစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကို vixen (သို့မဟုတ်ပူသမျှ) ရိပ်မိလျှင်။
သုတေသနဦးနှောက်ရဲ့လိင် / မိတ်လိုက် circuitry ၏သိပ်ဆွဟာနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေ pair တစုံ-Bond ယန္တရားပိတ်ဆို့ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
အဆိုပါဖြည့်ဆည်း Coolidge Effect
ကြွက်တစ်ကောင်အားကြွက်တစ်ကောင်ကိုလက်ခံသည့်ကြွက်တစ်ကောင်နှင့်အတူလှဲချသည့်အခါမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုစဉ်းစားပါ။ ပထမ ဦး စွာလိင်စိတ်နိုးထမှုရှိသည်။ ဒါဇင်ဝက်လောက်အကြာတွင်မီးရှူးမီးပန်းများကတောက်ပနေသည်။ သူမပိုလိုချင်ရင်တောင်သူစိတ်မ ၀ င်စားဘူး။ သူ၏ ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒက“ လှိမ့်လှန်ပြီး snore” ဟုတိုးတိုးပြောလိုက်သည်။ သို့သော်အမျိုးသမီးသစ်တစ် ဦး ပေါ်လာပါကသူသည်သူ၏ဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းများကိုလှောင်ပြောင်ရန်ကြိုးစားရန်သူ၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည်ကြာရှည်စွာပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ အထီးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့်သေလုနီးပါးတိုင်အောင်ဤဖြစ်စဉ်ကိုလတ်ဆတ်သောအမျိုးသမီးများနှင့်သင်ထပ်မံပြုလုပ်နိုင်သည်။
မိမိအပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ virility တစ်ခု insatiable လိင်စိတ်၏ညွှန်ပြမဟုတျပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကြည့်ရှု (နှင့်ယာယီအထံတော်သို့ခံစားရသည်) စခွေငျးငှါမျှမကထိုလမ်းသည်သူ၏ပေမယ့်သာယာဝပြောရေး-တိုးမြှင့်ထားဘူး။ သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine ၏အပွောငျးအလဲအသီးအသီးအသစ်ကအမျိုးသမီးအပြီးတတ်၏။ သူတို့ကသူ့ကိုမှာထား၏ မဖောက်ရသေးသည့်အဘယ်သူမျှမဆန္ဒရှိအမျိုးသမီးစွန့်ခွာ.
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဤဇီဝဗေဒအစီအစဉ်ကို“ Coolidge Effect” အဖြစ်သိကြသည်။ ယောက်ျားအသစ်များနှင့် ပို၍ ပရောပရည်လုပ်ရန်လေ့လာမှုပြုထားသောအမျိုးသမီးများသည်၎င်းသည်တိရစ္ဆာန်များတွင်လည်းတွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးရိုးဗီဇများသည်အနာဂတ်တွင်လှေများဖြင့်တတ်နိုင်သလောက်လှေများများစုစည်းရန်ကြိုက်နှစ်သက်ရုံသာမကသူတို့၏မျိုးဆက်များအကြားမျိုးရိုးဗီဇကွဲပြားမှုကိုလည်းကြိုက်နှစ်သက်သည်။
မျိုးဗီဇအိပ်ဘူး။ အစားလာပါ၏ "သူတို့လက်ထပ်စဉ်အမြဲပြီးနောက်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့" ဗီဇဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ, အမျိုးအနွယ်နှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူဗီဇသူတို့ကို-Burnham နှင့် Phelan ရနိုင်သားစဉ်မြေးဆက်-မဆိုလမ်းကိုအဆုံးသတ်၏စာရေးဆရာများ mean Gene
Dopamine သည်“ ရပြီ” ဖြစ်သည်။ အားလုံးလှုံ့ဆျောမှုနောက်ကွယ်မှအာရုံကြော။ အဲဒါမရှိရင်ငါတို့နို့တိုက်သတ္တဝါတွေဟာတရားရုံးမှာအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေဘူး၊ dopamine ပြန်လည်ကျဆင်းသွားသောအခါလှုံ့ဆျောမှုပါဘူး။ ဟေ့
ဒါဟာအစ Coolidge Effect ဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပိုကြွက်တူညီတဲ့အမျိုးသမီး, သူဝေးလံခေါင်ဖျား toting, ထိုကြောင့်အနှစ်သက်ဆုံးအဘို့အအကြီးအကဲသည်အထိကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု-သူသည်မိမိအဘို့ရရှိသွားတဲ့နည်း dopamine နှင့်အတူ copulates ။ အဘယ်သူမျှမသစ်ကိုအမျိုးသမီးတက်ပြသပေးခဲ့ကြသည်။
ဒီဂရပ်စဉ်းစားပါ။ သိုးထီးတကောင်အတူတူအမျိုးသမီးနှင့်အတူ copulates ပဉ္စမအချိန်ကချွတ်မရသူ့ကို 17 မိနစ်ကြာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကဝတ္ထုအမျိုးသမီးမှ switching စောင့်ရှောက်လျှင် ... သူကတတန်းအတွက်ထက်နည်းနှစ်မိနစ်, ငါးကြိမ်၌သူ၏တာဝန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သိုးထီးနှင့်မတူဘဲလူသားများ pair တစုံ bonders ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့အတူတူအမျိုးအနွယ်ကိုမြှင့်ရန်, ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကြိုးပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအကျွန်ုပ်တို့သည် Coolidge Effect မှ impervious င်ကိုဆိုလိုသလဲ Nope ။ ဤသည်ရှေးဟောင်းအစီအစဉ်ကိုလည်းကိုပုန်းကွယ်။ တယောက်သောသူက,
အလွန်ဈေးကြီးသော“ အချစ်ရုပ်” များရှိသည့်ယောက်ျားလေးများအကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ခဲ့သည်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်မှာများများစားစားရှိလို့သူ့အိမ်မှာအခန်းမရှိတော့ဘူး။ သော်လည်း ထိုအရုပ်ခဲ့ကြသည်သူဟာသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့လုံလောက်တဲ့အချိန်တွေပေးခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့စတင်တွေ့မြင်ခဲ့တယ်။ ယောက်ျားတွေကဘာကြောင့်များများစားစားဒီလောက်ညစ်ညမ်းနေတာလဲ။ ငါအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုကိုစုဆောင်းနေတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ပြန်လာတော့မယ်ဆိုတာမမှတ်မိဘူး။ အဆိုပါဆွဲဆောင်မှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု NEW ပုံရိပ်, ဝတ္ထုပုံရိပ်ကို ... ဝတ္ထုချစ်ခြင်းမေတ္တာအရုပ်။
က dopamine မြင့်တက်စောင့်ရှောက်သောသူအပေါင်းတို့ကို element တွေကိုပိုင်ဆိုင်အဖြစ်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏ထူးခြားမှု, မဆုတ်မနစ်အသုံးပြုသူတစ်တုတ်ချွန်နိုင်ပါတယ်။ စုံလင်သောပုံရိပ်ကိုထုတ် dopamine များအတွက်အမဲလိုက်ခြင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားမှု။ ထို့အပြင်အသစ်တစ်ခုခုကို kinkier တစ်ခုခုအမြဲအမြဲရှိပါတယ်။ တစ်ခုခုအာရုံကြောဆဲလ်တွေကိုအရူးနဲ့တူမီးဖြစ်စေတဲ့, မျှော်လင့်ခြင်းထက်ပိုပြီး arousal အခါ Dopamine ဖြန့်ချိသည်။
ဆနျ့ကငျြ, သင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဖြစ်ပါသည် မဟုတ် မျှော်မှန်းထားသည်ထက်အမြဲကောင်း၏။ မအဆုံးမဲ့အမျိုးမျိုးပူဇော်ထားဘူး။ သင့်ဦးနှောက်၏စရိုက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း dopamine ၏အရေအတွက်လှုပ်ရှားမှု-ပင်ကမရသောအခါတန်ဖိုးညီမျှယူဆဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အမှန်စင်စစ် porn ရဲ့ dopamine မီးရှူးမီးပန်းများတစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူလိင်ထက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုသောမူးယစ်ဆေးကဲ့သို့အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးအတွက် Playboy အင်တာဗျူးနောက်ဆုံးနှစ်တွင်ဂီတပညာရှင်ယောဟနျသ Mayer လိင်ဆက်ဆံထက်သူမဟုတ်ဘဲပုံရိပ်တွေမှချွတ်လူရှုပ်ချင်ပါတယ်ဝန်ခံခဲ့သည်။ သူကရှင်းပြသည်,
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကကျွန်တော့်ရဲ့မျိုးဆက်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုလုံးလုံးပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ရိုက်ချက်များစွာကိုအခြေခံပြီးသင် (လူတစ် ဦး နှင့်အတူ) အော်ဂဇင်ကိုမည်သို့အဆက်မပြတ်ဖန်တီးနိုင်မည်နည်း။ သင်ရှာဖွေနေသည်။ သင်ကျိန်ဆိုသည်မှာ ၁၀၀ အနက်မှသင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မည်၊ သင်မပြီးနိုင်သေးပါ။ လွန်ခဲ့သောစက္ကန့်နှစ်ဆယ်ကဓာတ်ပုံသည်သင်မြင်ဖူးသမျှအပူဆုံးအရာဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်ခဲ့သော်လည်းပြန်လည်ပစ်ချပြီးရိုက်ချက်ကို ဆက်၍ အလုပ်အတွက်နောက်ကျကျန်နေခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းသည်စိတ်ပညာအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။ ရတယ်
Mayer အဆိုပါ Coolidge Effect မှကျွန်ဖြစ်၏။ သူ့ဦးနှောက် dopamine နှင့်အတူသူတစ်ဦးဝတ္ထုမှနှိပ်လိုက်ရင်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်သူ့ကိုဒဏ်ချက် "အိမ်ထောင်ဖက်။ " dopamine အားလုံးစှဲအတွက်ချိတ်ကြောင်းစိတ်ကိုထားပါ။ ကိုကင်းဥပမာ, အစ (၎င်း၏ reabsorption ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်) ပိုလျှံ dopamine နှင့်အတူဦးနှောက်ကို flood ။
ကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲအဆက်အဆံပျက်ခြင်းတို့သည်ဆန္ဒမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါအသက် ၃၀ ကျော်ပြီ၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှစပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသုံးခဲ့တယ်၊ ငါ့ရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအပေါ်အပြစ်တင်ခဲ့တယ် (“ မင်းကိုငါသိပ်စိတ်မ ၀ င်စားဘူး” /“ သင်ပိုပြီးတုန့်ပြန်မှုရှိစေချင်ပါတယ်”)၊ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်နှင့်ကိုက်ညီရန်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအချိန်ပေးရန်လိုအပ်သည်။ ”“ ကျွန်ုပ်၏အတိတ်ဟောင်းကိုကျော်ဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်”)၊ ကြံ့ခိုင်ရေးအဆင့်၊ အစားအစာ၊ အသက်၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊
ယောက်ျားတွေအများကြီးကဲ့သို့ပင်, ငါဆရာဝန်တစ်ဦးထံသို့ ဝင်. မဆိုလေးနက်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများထွက်အုပ်ချုပ်မယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတယ်နှင့် Viagra တယ်။ ငါ၏အလက်ထပ်ထိမ်းမြားပျက်ကွက်, ငါနောက်တဖန်တစ်ခုတည်းခဲ့ပြီးတာနဲ့ porn အသုံးပြုမှု Overdrive-အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ရက်နှင့်မကြာခဏနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသုံးကြိမ်သို့သွားလေ၏။ ငါမရှိတော့ပင်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲအော်ဂဇင်မှ masturbate နိုင်သဘောပေါက်သောအခါ, တစ်ခုခုကလစ်ခဲ့သည်။ အကြောင်းနှင့်အကျိုးသင်တန်း၏, ယခု blindingly သိသာပုံရသည်။
ငါအရမ်းစွဲလမ်းတဲ့သူနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမဖျောက်နိုင်သေးဘူး။ သူမကဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးပြောဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်သင့်ရဲ့ချစ်ရာသခင်သည်က start ကိုအခြားသူများအိမ်လုပ်ဖရုံသီးပိုင်အဖြစ်သူမကိုတွေ့မြင်လျှင်ပင်အအေး oatmeal ကဲ့သို့သင်တို့မှကြည့်ဖို့သနည်း တဦးတည်းအချက်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ပုံမှန်မဟုတ်သောဆွ၏ဒီဂရီဖြစ်နိုင်သည်။ သိပ်ဆွအမှန်တကယ်မျိုးစုံရောဂါလက္ခဏာတွေကိုထုတ်လုပ်သင့်ဦးနှောက်၏အပျြောအပါးတုံ့ပြန်မှုထုံနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကသုတေသနပြုအပေါ်ကနေဒီကိုသိ လောင်းကစားသမားတွေ, overeatersနှင့်, သင်တန်း, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ။ ဦးနှောက်ကိုပိုမိုတုံ့ပြန်ရန်စတင်သည် ကိုအားနည်းစွာသမျှ dopamine မှ is ပတ်ပတ်လည်-ထိုကဲ့သို့သောအိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ကထုတ်လုပ်ကြောင်းအဖြစ်, "ပျားရည်, ကနေ့စွဲညပါပဲ။ "
Dopamine ကသင်၏အလိုဆန္ဒအင်ဂျင်များအတွက်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ တုံး sensitivity ကိုသငျသညျဓာတ်ငွေ့အများအပြားရှိသည်ပင်လျှင်, သင်၏ V-8 သာလေးဆလင်ဒါပေါ်မှာ run နေကြောင်းဆိုလိုသည်။ ရှေ့မှာပြုသကဲ့သို့သင့်ရဲ့ထုံဦးနှောက်ရိုးရှင်းစွာသူမ၏တုံ့ပြန်ပါဘူး။
ဖြစ်ချင်တော့၊ သင့်ကြင်ဖော်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်သင့်အားမခေါ်လျှင်ပင်၊ အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော (ဝတ္ထု၊ စွန့်စားမှု) တစ်ခုခုအတွက်သင်အလွန်ပြင်းထန်သောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုခံစားရပေမည်။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်နောက်တဖန်ကောင်းသောခံစားမှုမျိုးကိုလိုချင်နေသောကြောင့်ထို dopamine accelerator ကိုသင် ဆက်၍ ထိန်းထားနိုင်သည်။ လူရွှင်တော်ဘီလ်မာဟာသည်“ Hugh Grant ၌အိမ်တွင် Elizabeth လိရှဗက် Hurley ရှိပြီးသူသည် Marvin Hagler ကိုဆံပင်တုတွင်တပ်ဆင်စေလိုသည်။ ”
ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့အကြှနျုပျတို့အထူးသဖြင့်ပြင်းထန်သောဆွပြီးတဲ့နောက်ပိုပြီးမကျေနပ်ဖြစ်ပြောင်းလဲကြမလဲ? ဒီယန္တရားကိုမိတ်လိုက်ရာသီအတွင်း၎င်းတို့၏သဘာဝအမွတ်မပြေနိုင်သောပယ်ဖျက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်ကားမောင်းကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်မြင့်မားတဲ့ကယ်လိုရီအစားအစာန်းကျင်တုန်းကဖြစ်နိုင်သည်။ Coolidge Effect အမွှာ Turbo အပေါ်စဉ်းစားပါ။
ဥပမာအားဖြင့်, အခါ, တစ်ဦး guinea ဝက် အမျိုးသမီးတစ်ဦးလှောင်အိမ်သို့ချိုးဖဲ့သူဖခင်လေးဆယ်နှစ်ခွေးများနိုင်ခဲ့သည်။ (ဖမ်းမိတဲ့အခါသူဖြောင့်။ ဦးနှောက်ထိုကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောဆွကနေ recover လုပ်ဖို့အချိန်လိုအပ်ပါတယ်နှစ်ရက်အိပ်ပျော်။ ) ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းမျက်နှာသာအဘို့တောင်းစားအိမ်ထောင်ဖက်၏အလွန်များပုံရိပ်ယောင်များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ရေလွှမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်အလားတူမျိုးဗီဇလူ့အဖွဲ့အစည်းတခုရိပ် မိ. နှင့် obligingly ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်း မသိမသာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု numbing ခြင်းဖြင့်မူးရူးရန်။
သင်လုံလောက်စွာထက်ပိုသောအချိန်၌ပင်ဓာတ်ငွေ့ကိုအသုံးပြုရန်တိုက်တွန်းထားသောဤလျှို့ဝှက်ထားသော ဦး နှောက်ယန္တရားကိုသင်နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါက၊ သင့်ရဲ့လိင်စိတ်ပိုမိုအားကောင်းလာသည်နှင့်အမျှခံစားရသည်။ အဖြစ်မှန်မှာ ဦး နှောက်အတွင်းအာရုံကြောဓာတုဗေဒနည်းဖြင့်မကျေနပ်မှုများကိုပိုမိုနှိုးဆွရန်သင့်အားတိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့လိင်စိတ်အပူထိန်းကိရိယာပွုပွငျပွောငျးလဲခဲ့သကြောင်းသဲလွန်စပါလိမ့်မယ်: သင်နာမငြိမ်ခြင်းနှင့်အချိန်ကိုပိုပြီးမကျေနပ်ခံစားရ; သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူ kinkier လိင်ချင်; အင်တာနက်ကိုထက်ဆွဲဆောင်မှု / သင့်အိမ်ထောင်ဖက်လျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေ; ဒါကြောင့်ထွက်ကျပိုလွန်ကဲပစ္စည်းလိုအပ်ပါတယ်နှင့်။ ကျွမ်းကျင်သူများက "ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပဌနာသည်းခံနေခြင်း။ "ဒါဟာတစ်ဦးညွှန်ပြနိုင်ပါတယ် အလုပ်မှာစွဲဖြစ်စဉ်ကို ဦးနှောက်ထဲမှာ။
တဖန်ငါ, ငါ၏ဟောင်းမှစကားပြောစတင်ပါတယ်။ ငါသူမ၏လိင်စိတ်မဝင်စားတွေ့ရှိခဲ့သောကွောငျ့ငါဝေးကွာသောမဟုတျကွောငျးရှငျးပွခဲ့သ, ဒါပေမယ့်ငါသူမရဲ့ခြေနှင့် juggling ခံရဖို့လိုအပ်ပါပြီချင်ပါတယ်ဒါအများကြီးကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့မြင်းကိုချွတ်နို့စို့နှင့်များအတွက် [တယောက်] rimming ခဲ့သောကြောင့်, ငါ့ကိုအပြည့်အဝ lovemaking စဉ်အတွင်းစေ့စပ်ခံရဖို့။
ဘယ်လို Porn Pair ကို Bond နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ပါသလား?
pair တစုံဘွန်းကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သားစဉ်မြေးဆက်အကျိုး အကယ်. ကျနော်တို့ဝတ္ထုဆိုက်ဘာ၏ dopamine အလုအယက်အပေါ်ချိတ်ဆက်ခံရမှုမှဒါအားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့် "အိမ်ထောင်ဖက်?" ဝိရောဓိကျနော်တို့မေတ္တာ၌လဲဦးနှောက်ယန္တရားများဝင်စားသောကွောငျ့, ထို့နောက်တစ်ခုကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ နှောင်ကြိုးတွဲဖို့ဒီစွမ်းရည်အပေါ်လုံးဝမှီခိုဖြစ်ပါသည် dopamine ၏ပေါက်ကွဲမှုများ ငါတို့ချစ်ဆားကစ် goosing ။ ကရာဖြစ်ကြောင်းနို့တိုက်သတ္တဝါများ၏ 97% များတွင်ရေရှည်တည်တံ့ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဤဦးနှောက်ဆားကစ်ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်၎င်း၏ကရာဝမ်းကွဲခြင်း, montane vole အတူလူမှုရေးအရ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါသူတို့နှစ်ဦးကိုစပ်စုမှုအရာတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းရန်, ဒါမှမဟုတ်လဲ "မေတ္တာ" ဖြစ်ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များ စွဲဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့။ သူတို့ကစွဲလမ်းတ္ထုများအနေဖြင့်တစ်ဦးပိုကြီး dopamine ပေါက်ကွဲမှုရယူပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောအလွယ်တကူထိုကဲ့သို့သောအင်တာနက်က porn နှင့်လောင်းကစားဝိုင်းအဖြစ် dopamine ထုတ်လုပ်သောတ္ထုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့်ဖျားယောင်းကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအလား?
ပို. ပင်ပြောရာမှာဘာလဲ မ သိပ္ပံပညာရှင်များသူတွေဟာဓာတုဆွအတူ pair တစုံ bonders '' ဦးနှောက်ရေလွှမ်းသောအခါအဖြစ်ပျက်။ ဤရွေ့ကားသဘာဝကျကျ monogamous တိရိစ္ဆာန်များ နောက်တဖန်အ preference ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည် တဦးတည်းအဖော်များအတွက်။ အဆိုပါအတုဆွရုံပုံမှန်အစည်းအဝေး (ကရာ) နို့တိုက်သတ္တဝါများကဲ့သို့သူတို့ကိုငါစွန့်ခွာ, သူတို့ရဲ့ dopamine-မှီခို Bond စက်ယန္တရားပြန်ပေးဆွဲခဲ့သည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာအလွန်မြင့်တက်မှုကိုအာရုံခံနိုင်သည့် ဦး နှောက်တစ်ခုထားခြင်းကသင်၏စုံတွဲနှောင်ကြိုးကိုထောက်ကူသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်ကမင်းကိုမူးယစ်ဆေးမသုံးရင်မင်းကခင်ဗျားရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးချိတ်ထားလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့, သင်သည်ပြောင်းလဲမှုပြုသကဲ့သို့ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှခိုးကူးခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာအခြားသွေးဆောင်မှုများစွာမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (အကယ်၍ သွေးဆောင်မှုကသင်၏ရင်ခွင်၌ကျလျှင်သင်၏မျိုးဗီဇသည်သူတို့၏ dopamine နှင်တံကိုကွဲစေနိုင်သည်။ )
သို့သော်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ပါ ၀ င်ရန်တိုက်တွန်းသည့်တူညီသော sensitivity သည်သင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမွန်သောစိတ်ကိုလှည့်စားခြင်းဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည့်အခါအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်မှာထင်ရှားပါသည်။ ရုတ်တရက်သင်၏တွဲဆက်မှုနှောင်ကြိုးပေါ်မူတည်သောတိုက်နယ်သည်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်သော dopamine နှင့်ပေါင်းစပ်နေသည် အခြား သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ထက်။ ဒါဟာအိမ်ထောင်ဖက်စိတ်မဝင်စားပါစေ, သင်၏သာမန် satiation ယန္တရားများထပ်ရေးနိုင်ပါသည်။
ဝေးမယ့်အနေဖြင့် "ချွတ်ပွတ်တိုက်," ကျနော်တို့နာတာရှည်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေယေဘုယျအားဖြင့် "ကျနော်တို့ကိုခေါ်နေတဲ့အလေ့အကျင့်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံedging": သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အကြိမ်ကြိမ်အော်ဂဇင်ရဲ့ချောက်ကမ်းပါးမှကိုယျ့ကိုယျကိုမြင်၏။ [အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းများ၏ချိုးအသစ်အဆန်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်] ကျနော်တို့နာရီစာသားလိင်စိတ်နိုးထ၏အလွန်အမင်းမြင့်မားရေရှည်တည်တံ့နိုင်ပါ။ ငါတော်တော်များများတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-အာရုံစူးစိုက်သည်အင်တာနက်အုပ်စုများအတွက်တက်ကြွစွာပါဝင်သူဖြစ်ကြောင်းကို, တဦးတည်း၏အက Moderator.
ကျွန်တော်တို့အများစုကမိတ်ဖက်ရရှိနိုင်ပါနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်နေဆဲပင်စဉ်ယခုအချိန်အထိမိတ်ဖက်-လိင်စွန့်ခွာရန်အဖြစ်သွားပါ။ ငါတို့သည်လည်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစေရန်, ဒါပေမယ့်မဖက်ဘို့ up ပြုလုပ်ရနိုင်ဖြစ်ခြင်း၏ဘုံဖြစ်ရပ်ဆန်းဘို့ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို "copulatory ခွန်အားမရှိခြင်း" စတင်သုံးစွဲပါတယ်။
ဒီညစ်ညမ်းရှုမြင်တတ်သောသူအပေါင်းတို့ကသူ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားပေါ်တက်ငါပေးမည်ဆိုလိုပါသလော ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ သို့သော်လူ့ pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ-်ရောက်စွက်ဖက်ထက်အယူအဆများအတွက်ထောက်ခံမှု supernormal ဆွ-ပင်လျော့နည်းလှုံ့ဆော်ဗားရှင်းအတွက်ပြီးသားသုတေသနအတွက်တက်ပြသခဲ့သည်။
တစ်ဦး၏အဆိုအရ 2007 လေ့လာချက်, sexy အမျိုးသမီး၏ရုပ်ပုံများကိုတစ်စီးရီးမှမျှသာထိတွေ့တစ်ဦးသောသူသည်မိမိကို real-ဘဝလက်တွဲဖော်တနျဘိုးလြော့စေရန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူကဆွဲဆောင်မှုအပေါ်, ဒါပေမယ့်လည်းနွေးထွေးမှုနှင့်ထောက်လှမ်းရေးအပေါ်သာအနိမ့်သူမ၏ rates ။ ဒါ့အပြင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုတစ်ဦးအတွက်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဘာသာရပ်များပြီးနောက် 2006 လေ့လာချက် သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမိတ်ဖက်-အပါအဝင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့ချစ်ခင်, ပုံပန်းသဏ္ဌာန်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိချင်စိတ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူလျော့နည်းစိတ်ကျေနပ်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်စိတ်ခံစားမှုပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲလိင်မှတိုးချဲ့အရေးပါမှုတာဝန်ပေးအပ်။
သငျသညျကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရောငျ့ရဲအတွက်လက်ထပ်နေဖို့လိုလျှင်သိသာထင်ရှားတဲ့, သငျသညျကိုရှေးခယျြခွငျးအားဖွငျ့ပိုမိုလွယ်ကူသင့် task အောင် မဟုတ် သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟမ်ဘာဂါကူညီတူစေသည်ဟုအမြင်ဆိုင်းဖြစ်ပေါ်ဖို့။
ဒါကြောင့်အကြောင်းအရာ pair တစုံ bonder အဘို့အထဲတွင်ဘာလဲ ဘေးဖယ်တစ်ဦးတည်းသာအိမ်သူအိမ်သားထိန်းသိမ်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ရှိခြင်းကနေသူကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိမညျဖွစျသညျ။ ဥပမာအားဖြင့်, သုတေသနလိင်ဆက်ဆံမှုကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပိုပြီးအကျိုးရှိသက်ရောက်မှုထက်ရှိကြောင်းပြသ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ။ ထိုသို့ neurochemicals ဖြန့်ချိ ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများနေ့ရက်ကာလအဘို့ရစ်။ ဒါ့အပြင်စုံတွဲများအကြားနေ့စဉ်နွေးထိတွေ့ခြင်းဖြင့်ယောက်ျားအကျိုး သွေးဖိအားလျှော့ချ။
အဆိုပါနှငျ့မတူဘဲ, စိတ်အေးလက်အေးရငျးနှီး ချစ်ခင်ထိတွေ့မှုအပေါ်အလေးထား soothes, ဒါပေမယ့်လည်းအလိုအလြောကျခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ခိုင်မာစေမသာ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏အလယ်တွင်နှစ်အတွင်းမှာတော့ငါသည်ငါ၏မယားကိုကိုးကွယ်ဖြတ်။ အဲဒီအစား yoni များများဟာညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏ဝတ်ပြုရေးတွင်ယဉ်ကျေးဖို့ရှိ၏။ အမြဲတမ်းနုပျို။ အမြဲတမ်းအဆင်းလှ။ အမြဲတမ်း horny ။ အမြဲတမ်းအသစ်သော။ တစ်အော်ဂဇင်ရဖို့အမြဲတမ်းနိုင်ကြ။ နှင့်ပြည့်စုံဘူး။ ငါမကြာသေးမီက porn ကနေလုံးဝ unplugged, ငါသူမ၏အောက်ခံငါ့ဇနီးပြန်သွားကြပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားရှည်မှာဟောင်းနွမ်းကာလများထဲကလာနှင့်ဝိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အိပ်ရာနှင့်နေ့ရက်ကိုတလျှောက်လုံးကျနော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ရပြီထက်ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ကြသည်။ ငါတကယ်တကယ်အဆုံးသတ်-ကျနော်တို့ဘယ်တော့မှကြောင်းဖွင့်မယ့်ချိုးယူပြီးနောက်နေ့နောက်တဖန် start ရှည်, နှေးကွေးနေသည် non-ရည်မှန်းချက်-oriented lovemaking ခံစားနေပါတယ်။ ငါပိုကောင်းခံစားရတယ်, ငါ့လိင်စိတ်ကိုပိုမိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
သင်သည်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်ရန်သင့်လိင်စိတ်နိုးထ re-လင့်ထားသည်နိုင်ပါတယ်။ သူမမထက်ပို dopamine ထုတ်လုပ်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုမှ climaxing ရပ်တန့်။ သတိရပါသင့်ဦးနှောက်ထဲမှာစရိုက်ယန္တရားအမြဲအရှိဆုံး dopamine ဖြန့်ချိသော 'option ကိုအာရုံစိုက်ရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးသင်၏ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ပေးသည်, သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ဆကျဆံရေးထောက်, သင့်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချပေးခဲ့သောအရာကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။ e-သူငယ် beckons အခါ, သင့်ဦးနှောက်ကိုသင်ဗီဇ-ပြန့်ပွားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း-ထိပ်တန်းဦးစားပေးနေယူဆတယ်။
ယခုတွင်သင်သည်ဒီနေ့ရဲ့အစွန်းရောက်ဆွသဘောရိုးသင့်ဦးနှောက်ထဲမှာတချို့ atavistic ပရိုဂရမ်းမင်းနှင့်အတူ messing အားဖြင့်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်၏ကျေးဇူးတင်ကြောင်းမဖြစ်နိုင်နိုငျပုံကိုနားလည်ကြောင်း, သင်မှတက်ပါတယ်။
ငါရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့ porn မှ masturbating ရပ်တန့်ကတည်းကအမှုအရာပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ ငါကောင်းတဲ့အင်္ကျီသို့မဟုတ်စားဆင်ယင်အတွက်အားဖြင့်ရှည်သောဆံပင်လမ်းလျှောက်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုမြင်သောအခါ, ငါသည်စွမ်းအင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုအယက်ရယူပါ။ ငါ arousal မဆိုအမျိုးအစားရဖို့ကအင်တာနက်ကနေအားကောင်းညစ်ညမ်းစိတ်ကူးယဉ်လိုအပ်ခံရဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးအပေါ်လိင်တူချစ်သူ၏အတွေးများ (“ The Good Men Project” တွင်တင်ထားသည်):
ဤဆောင်းပါးသည်ဖွင့်ဟချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သောမတ်စ်မက်ကလော့ခ်ရဲ့ NYT ဆောင်းပါး၊ “ Man I Need A Good Cuddle” ဆောင်းပါးနှင့်ဒီဆောင်းပါးတို့မှတဆင့်ဒီ AM လေးကိုငါဖြောင့်တန်းတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဘ ၀ ကိုထိမိခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများအတွက်စကားမပြောနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တူချစ်သူများကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်ခြင်းတို့တွင်လမ်းမှားအဖြစ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများ၏လိင်မှုဘ ၀ ၏စံနမူနာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားအမျိုးသားများနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအတွက်စွမ်းရည်ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုအမှန်တကယ်နားမလည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သားကောင်ကိုငိုရန်ဂရုမစိုက်ပါ။ သို့သော်လိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကိုအထောက်အကူပြုသော်လည်း (ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ)၊ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများကိုသတိမပြုမိပါ။ ရုတ်တရက်ငါလိင်တူချစ်သူယောက်ျားများ, "လိင်အပြုသဘော" ဖြစ်ခြင်း၏စိတ်အားထက်သန်ဘက်လျက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝများစွာအတွက် dopamine swirl အနည်းငယ်မှီဝဲနိုင်သတိထားမိသည်။ ဆွေးနွေးမှုကိုထည့်သွင်းရန်အချက်အလက်အချို့ကိုဤရိုးသားစွာဖော်ထုတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။